Fitaovana mahagaga 3 tokony ho fantatrao momba ny Lean Six Sigma | NY
3 fitaovana mahatalanjona tokony ho fantatrao momba Lean Six Sigma
Lean Six Sigma dia fandaminana fomba sy fitaovana hanovana ny fizotry ny fizahana. Navoakan'ny mpahay tantara Bill Smith nandritra ny fiasany tao Motorola tamin'ny 1986. I Jack Welch no tena nilaina tamin'ny teknikan'ny orinasa tao amin'ny General Electric tao 1995. Amin'izao fotoana izao dia ampiasaina ho isan'ny sehatra maro misimisy izy io.
Mitodika amin'ny fanatsarana ny karazan-tsoa amin'ny fikarakarana amin'ny alalan'ny fanavahana sy ny fandroahana ny antony tsy fahatanterahana sy ny fampihenana ny tsy fitoviana eo amin'ny fanangonana sy ny fandraharahana ara-barotra. Mampiasa fandaminana ny fomba fitantanana sarobidy izy io, indrindra ny fanaraha-maso, tetikady tena izy, ary mahatonga ny rafitra mahazatra ho an'ny olona ao anatin'ilay fikambanana izay manam-pahaizana manokana amin'ireo paikady ireo. Ny Six Sigma tsirairay dia nitazona tao anatin'ny fikambanana iray narahina dingana maromaro misy karazana ary misy fiheverana manokana, ohatra: mampihena ny faharetan'ny dingana arak'asa, mampihena ny tsy fahampian-tsakafo, mampihena ny fandaniana, mampitombo ny fidiran'ny mpanjifa, ary ny tombontsoa mitombo. Fitaovana mahagaga 3 tokony ho fantatrao momba ny Lean Six Sigma:
1. Six Sigma Yellow Training Belt & Certification
Sora-baventy momba ny Belt Yellow Yellow
Ny andraikitry ny fehikibo mavo
Inona no fampiofanana omena?
Fampiofanana fampidirana ao amin'ny fototry ny Six Sigma.
Ny fiantraikan'ny sora-baventy mavokely mavo amin'ny asa ataonao
2. Six Sigma Green Training & Certification
Sora-baventy momba ny Belt Green
Ny anjara asan'ny Seix Sigma Green Belt
Ny fampiasana tsara ho an'ny fampiofanana sy ny fanamarinana maitso
Ny fomba fiasantsika ny fikarakaranareo
3. Lean Six Sigma mozika manga sy mendrika
Black Belt Certificate Overview
Ny anjara asan'ny Seix Sigma Black Belt
Six Sigma Filozofia fanatsarana ny fizotry ny asa
Ny sahan-kevitra momba ny fanamiana fiaramanidina Candy Lean Six Sigma
Ny "Special Services Service" faharoa dia manome toky fa tena miavaka ny fahalalana momba ny Fandefasanao ny Six Sigma Yellow Belt. Na miaro isika fa ny rakitsary dia misokatra ho anao amin'ny toe-javatra rehetra, na raha manana fanontaniana mifandraika amin'ny mari-pamantarana ny Six Sigma Yellow Belt ianao, ny fialan-tsasatra dia manome antoka fa ny ekipan'ny Customer Customer dia hanome hery anao hahazo ny ankamaroan'ny traikefa an-tserasera.
Six Sigma Yellow Belt miomana dia manome fahatakarana ny paikady momba ny Six Sigma, ny fandrefesana azy ary ny fomba fiovana ilaina. Ny fehikibo mavo dia manamafy ny fampahalalana momba ny fomba handaminana ny fomba fiasa six Sigma momba ny fanovàna ny famoronana sy ny rafitra mifototra amin'ny lanjany mba hanatsarana kokoa ny fanirian'ny mpanjifa sy ny tanjona lehibe momba ny fiarahan'izy ireo.
Ny fehin-tany mavomavo dia manana fianarana tena ilaina amin'ny Six Sigma, nefa tsy mitarika azy manontolo mihitsy. Matetika izy ireo no miandraikitra ny fampandrosoana ny sarintany handrafetana ny Six Sigma. Ny fehikibo mavomavo dia mahaliana ny mpiara-miasa amin'ny mpiara-miasa na ny lohahevitra (SME) eo amin'ny asa aman-draharaha. Ankoatr'izay, ny gavety mavo dia mety matetika miandraikitra ny fampivoarana ny fiovaovan-tsolika amin'ny fampiasana ny paikady PDCA (Plan, Do, Check, Act). PDCA, izay heverina ho toy ny Kodiarana Deming, dia manome hery ny Mavokely mavo mba hanavaka ireo endrika mety hahasoa amin'ny fiovana. Ireo fehim-bolo Yellow littler dia mihamitombo hatrany amin'ny fampitomboana ny Belt Green na Black Belt izay ampiasain'ny rafitra DMAIC hampandrosoana ny tahiry tahiry amin'ny fampiasana ny Statistical Process Control.
Six Sigma Yellow Belt miomana dia manome soso-kevitra momba ny fitantanana ny fitantanana sy ny fitaovana fototra amin'ny Six Sigma, izay manome mpiasa bebe kokoa ny fomba fandaminana, manome hery ny olona rehetra hanome fanampiana manan-danja amin'ny fanatanterahana ny tanjona jeneralin'ny fikambanana. Ny fanamarinan-jiro fingan-tsambon'i Six Sigma dia mandroso ihany koa:
Ny maha-mifanaraka ny solontenany amin'ny ampahany amin'ny Six Sigma
Ny fividianan'ny mpiasa amin'ny Six Sigma
Ny fampiasana ny tontolo iainana isaky ny miasa (miteraka fihenan'ny faharetan'ny dingana, ny kalitao ary ny fako)
Ny fehin-kodiarana mavo no manangona vaovao, mandray anjara amin'ny hetsika fisainana mitsikera ary manampy ny fihaonany manokana amin'ny fikarakarana fanadihadiana. Tsy ny gavim-boninahitra ihany no manangona ireo fahaiza-manao ilaina mba hahafantarana, ny fisehony ary ny fanaraha-maso ny sakafo misakafo amin'ny fomba fiasany manokana, na izany aza, izy ireo koa dia mikarakara ny famokarana ireo angon-drakitra amin'ny Black Belts sy Green Belts izay mitifitra amin'ny rafitra lehibe kokoa.
Fanamarihana: Tsy misy ilàna azy ho an'ny tetikasa misy antsika. Ny ankamaroan'ny zavatra ianaranao ao amin'ny Programa Fandefasana mavomavo mavo sy maitso dia azo jerena ao amin'ny Programan'ny Fanamafisana Black Belt. Ny fanadihadiana izay maniry ny hisafidy mivantana ao amin'ny Programa Green Belt na Black dia ampirisihina hanao toy izany.
Ny mozika mavomavo miorina ao amin'ny Six Sigma Online dia mitovy amin'ny an'ny "American Society for Quality (ASQ)" fanamarinana ho an'ny Black Belts. Amin'ny maha-gradioma ho an'ny Six Sigma anao dia tsy hisy vokany eo amin'ny fiantsoana anao fotsiny, fa eo amin'ny fiainanao.
Ny fandaharanay fanabeazana momba ny Fandefasana Belt Six Sigma Green dia mifanandrify amin'ny fenitry ny serivisy Amerikanina ho an'ny Quality (ASQ) ho an'ny Green Belts. Amin'ny maha-sehatry ny Six Sigma Online Green Belt, ianao dia tsy hanatsara ny fiantsoana anao fotsiny, fa manova ny ampahany rehetra amin'ny fiainanao. Enjiro androany ary tadiavo ny fanamarinana ny Six Sigma Green Belt anao ao anatin'ny segondra vitsy.
Six Sigma Green Belt manomana ny mpikambana hanatsara ny fahaiza-misaina fisainana kritika, miaraka amin'ny fifehezana ny fisehoana DMAIC (Famaritana, Measure, Analyze, Improve and Control). Six Sigma Green Belt dia manamarina ny mpiasa mba hiasa amin'ny mpiara-miasa voaomana ao anatin'ny faritra misy azy manokana. Io fifantohana io dia mamela ny Green Belt hisintona kely amin'ny sigara sy sira Sigma, izay tsy misy ilàna azy, ary tsy mitaky ny adidiny manontolo amin'ny Black Belt amin'ny Six Sigma manontolo amin'ny alalan'ny fikambanana.
Ny Belt Green dia misy zavatra roa manan-danja: hanombohana, hanampy amin'ny famoahana ny Six Sigma fomba fitsaboana, ary faharoa, ny mitarika ny fiovana madinika dia manitatra ao anatin'ny faritaniny. Amin'ny maha-vahoaka be volombava, ny Green Belts dia afaka manao ampahany manan-danja amin'ny legwork amin'ny fampahalalam-baovao sosialy sy fanatanterahana fitsapana ho fanohanana ny fanitarana ny Black Belt. Izy ireo dia manampahaizana manokana izay mampiasa 25% ny angovo azony amin'ny orinasan'ny Six Sigma ho an'ny tenany na ho fanohanana ny orinasan'ny Black Belt. Ao anatin'ilay fanofanana fiara fitaterana Sigma Green ianao dia ho hitanao ny fomba fampiasana ampahany mahery amin'ny sain-tsiok'i Six Sigma momba ny fisainan-tsaina sy fitaovana maoderina mba hanampiana amin'ny fanatontosana ny fikambanana.
Na amin'ny asa fanompoana ataon'ny olona, ​​ny famatsiam-bola, ny fananganana, ny governemanta, na ny karazana fitantanana hafa na ny indostrian'ny orinasa ... Ny Six Sigma Green Training Training dia tonga lafatra ho an'ny olona manantena ny hahazo ny ankamaroan'ny fiantsoana azy. Ny fanadihadiana dia hahitana ny fomba fampiharana teknika azo fehezina amin'ny raharaham-barotra manomana fiovana tahaka izao:
Fitantanana ny tetikasa mampiasa DMAIC sy DMADV
Manamafy ny foto-kevitra "Define" sy "Measure" ny DMAIC
Sari-tany momba ny fitondran-draharaha sy ny fandrefesana
Fanamarihana: Tsy misy fepetra takiana amin'ny tetikasa misy antsika. Ny ampahany lehibe amin'ny zavatra hianaranao ao amin'ny Fandaharan'orinasa Mavo sy Green dia voasarona ao amin'ny Programan'ny Fanamafisana Black Belt. Ny fanadihadiana izay maniry ny hisafidy mivantana ao amin'ny Programa Green Belt na Black dia ampirisihina hanao toy izany. Ny Sigma Green Sigma Green Six Sigma Online sy ny fanamafisana ny fanabeazana an-tserasera dia mitovy amin'ny an'ny American Society for Quality (ASQ) fanamarinana ho an'ny Green Belts. Amin'ny maha-sehatra Six Sigma Green Training ianao, dia tsy hisy vokany eo amin'ny fiantsoana anao fotsiny, fa eo amin'ny fiainanao.
Ny fandaharam-pampianarana fanofanana fiara Six Sigma Black Belt dia mitovy amin'ny an'ny "American Society for Quality (ASQ) standard of certification amin'ny Black Belts. Miaraka amin'ny fanamarinanao ny Six Sigma Black Belt, dia tsy hisy vokany eo amin'ny asanao ihany, fa eo amin'ny fiainanao. Azonao atao ny manova ny fiainanao amin'ny fanamafisana ny Black Sell Sigma Online.
Ny Fitaovam-piofanana fiara Giney Six Sigma dia manome fampahalalana goavana momba ny fomba fiasa sy fitsipi-pitenenana Six Sigma (miankina amin'ny fanohanana ny rafitra sy ny fitaovana). Ny Black Belt dia manamafy ny fahatakarana ny fitantanana ny vondrona, ny fivoaran'ny gropy, ary ny mamolavola ny mpiara-miasa amin'ny ampahany sy ny andraikitra. Ny Fitaovan'ny Black Belt dia mamolavola ny fahatakarana ny endriky ny DMAIC araka ny fenitra Six Sigma, ny fianarana manan-danja ireo hevitra manjavozavo, ary ny fahaiza-manao hanavaka haingana ny "fampiharana tsy misy lanjany".
Ny fingotra mainty dia mifantoka indrindra amin'ny famonoana, na dia mifantoka amin'ny fankasitrahana ireo orinasam-pandraharahana sy fahaiza-manao ho an'ny Six Sigma ny Tompondakan'ny Tompondakan'i Black and White. Ny fiomanantsika ny Lean Six Sigma Black Belt dia manome ireo olona ireo ny fitaovana ananany ny fanamarinana ny Six Sigma Black Belt, izay tena ilaina amin'ny fanampiana azy ireo hanohitra ny anjarany amin'ny laharana amin'ny programa sigma enina ao amin'ny fikambanana. Six Sigma Black Belt miomana dia mampiseho azy ireo ny fomba fitantanana ny Six Sigma firoborobo izay ahafahan'izy ireo mivantana mivantana ireo asany ao anatin'ny fikambanany.
Matetika ny boribory mainty no hitazona io toerana io mandritry ny roa taona amin'ny fe-potoana feno ary aorian'izay dia hiverina amin'ny adidiny amin'ny adidy ambarany izy ireo aorian'izany. Miantehitra, mamorona, mitarika ary mandrisika ny fitantanana sy ny mpiasa hanatontosa ny tanjony. Izy ireo dia takiana amin'ny fanatanterahana asa miaraka amin'ny tahirim-bola tahiry amin'ny $ 100,000 - $ 250,000.
Na amin'ny asa fanompoana ataon'ny olona, ​​ny famatsiam-bola, ny fananganana, ny governemanta, na ny karazana fitantanana hafa na ny indostrian'ny orinasam-piorenana ... Ny Six Sigma Black Training dia mampiavaka ny olona izay manantena ny hahazo ny ankamaroan'ny asany. Indreto misy zavatra roa hitanao amin'ny fikarakaranao mainty hoditra:
Nifantoka tamin'ny raharaham
Fiovana efa napetraka
Mampianatra fikambanana mahay mandinika
Fanamarinana amass / manam-pahaizana
Ny fehikibo vita amin'ny Lean Six Sigma dia manome antoka fa vonona ianao:
Miaraha miasa sy mahatakatra ny fitsipiky ny mpanjifa
Ampitomboy ny fahaizan'ny fitsaboana mba handresena ny fanirian'ny mpanjifa
Ny fanavahana dia manitatra sy mifantina mpiara-miasa
Miaraha miasa amin'ny mpampiasa mba hananganana sisintany fananganana Six Sigma
Mandehana toy ny manam-pahaizana anatiny
Mitarika sigara Sigma
Manomana / manoro / manoro Green belts sy vondrona mpandraharaha
Mandehana ho toy ny lozam-pivoarana amin'ny fiovan'ny fizotry ny fiasa
Manomana vondrona miaraka amin'ny fanohanana sy fandraisana andraikitra tsy tapaka
Manomeza valiny momba ny fitantanana